Izimfihlo zochwepheshe okwenzayo
Abaningi kulaba besifazane bazama ukwakha ukwakheka okufanayo nsuku zonke, njengabaculi abadumile noma abadlali, kodwa akuzona wonke umuntu. Lokhu akusho ukuthi abesifazane abavamile babi kakhulu, kubalulekile ukwazi izimfihlo zomsebenzi ezenziwe ngabaculi bezithombe. Ukusebenzisa okuhlangenwe nakho kwabo, ukubheka okungalungile kunanoma yimuphi intombazane ekhoneni, kulula. Lapha ungakwazi ngisho nokudela ikhwalithi yezimonyo - uchwepheshe ubiza izikhathi eziningana ngaphezu kwalokhu abesifazane abaningi basebenzisa. Kodwa ngisho nekhwalithi ayibalulekile njengekhono elifanele lokusebenzisa amapende.
Awuzange uqaphele ukuthi lezi zinsimbi eziningi, nakuba zibukeka zidwebe, kodwa ngesikhathi esifanayo ubuso babo bukhanye ngobuhle obungokwemvelo? Yenza izindebe zakho zilungele kahle, zikhanyise, zihlume, kodwa zenzeke ngokwemvelo, ungakwazi.
Okokuqala, thatha ipensela evumelana ngokuphelele nethoni yesikhumba sakho bese ucacisa umlomo we-lip. Uma izindebe zincipha kakhulu, ungakwazi ukuhamba kancane ngaphezu kwemvelo yazo. Ukumboza isikhala esisele ngokukhipha ukhilimu kuqala, ngakho-ke, uma somile, nge-neutral lip icwecwe. Ngakho-ke, uthola izindebe ezibukeka zendalo, kodwa zingcono kunalokho obekujwayele ukubona esibukweni.
Ukuze uqinisekise ukuthi i-lipstick igcinwa ezindebeni isikhathi eside ngangokunokwenzeka, futhi akudingeki ulungise ukuzenza njalo njalo, kunezinye izimfihlo ezikhohlisayo. Okokuqala, gcoba izindebe zakho ngekhilimu yeso njalo. Uma ukhilimu ususwe, susa izinsalela bese umboza izindebe ngezingqimba zesisekelo. Phezulu kwalo, sebenzisa i-lipstick, kodwa qiniseka ukuthi ususa ngokweqile nge-napkin.
Abantu abambalwa kakhulu banelisekile ngokuphelele ngekhala labo. Abaningi bangathanda ukukushintshanisa nganoma iyiphi enye, beqiniseka ukuthi ngisho nekhala langaphandle ngeke libukeke libi kakhulu. Kodwa ukusebenza kuxazululwa ngabambalwa, futhi umuntu ngamunye angalungisa ukuma kwempumu.
Uma ucabanga ukuthi ikhala lakho likhulu kakhulu, faka ukhilimu we-tonal kumaphiko wekhasi lakho elimnyama kunalowo oyisebenzisela amathoni amabili. Uma iphunga lakho libonakala lide, sebenzisa isisekelo esimnyama esiphansi.
Ungasebenzisi powder oluyimpuphu ngezinhlayiya ezicabangela lezozindawo lapho usebenzise khona isisekelo esimnyama.
Ukuze wenze i-eyelashes ibe mnandi kakhulu, khetha umthunzi wezithunzi ezihambisana kahle namehlo akho, isikhumba, umbala wezinwele kanye nezingubo ozokuba kuyo. Thatha ipensela yakho evamile bese uwahola emgqeni wokukhula kwe-eyelashes, njengokungathi ukudweba isikhala phakathi kwabo. Khona-ke, eduze komugqa wokukhula kwe-eyelashi, faka izithunzi, sebenzisa i-mascara.
Uma ufuna ukuvula amehlo akho ngaphezulu, sebenzisa ihlumela lamathunzi alula emakhoneni angaphakathi kwamehlo nangaphansi kwamashiya.
Uma ungathanda ukunciphisa usayizi wamehlo akho, sebenzisa izithunzi ezimnyama ejwabu leso leselula.
Ukuze isikhumba sikhanyise, kufanele uhambisane ngokucophelela. Ukuze wenze lokhu, uzodinga isisekelo sokwenzela ukukhanya kwethoni kunesikhumba sakho, bese isisekelo, esifanele ithoni kanye ne-powder enezinhlayiya ezicatshangayo. Akufanele kube yimpuphu ngokukhanya okukhulu. Ungayisebenzisi endaweni ye-T, ngaphandle kwalokho isikhumba sizobukeka sinamafutha.
Ukuze uzenzele ama-cheekbones avelele, njengabo bonke abadlali abathandwayo nabamodeli, akudingeki ukuthi ujobe abicah. Kwanele ukusebenzisa ukuhlunga kahle. Ukwenza lokhu, sebenzisa ukuhlunga phezu kwama-cheekbones ngaphansi komthunzi omnyama, futhi esikhala ngaphezu kwazo - umthunzi okhanyayo. Lokhu kuqhathaniswa kuzokusiza ukudala ukukhohliswa kwama-cheekbones aphakeme futhi ushintshe isimo sombuso.
Ukusebenzisa lezi zimfihlo, ungashintsha indlela owake waphupha ngayo ngaphandle kosizo lwagqirha noma abaculi abazakhele ubuchwepheshe.
Ukuhlanganiswa kombala we-blush namehlo
Indlela yokwenza izinwele nokwenzela iphathi
Kusukela kuma-60 kuya ko-80: izitayela zokwenziwa kwentwasahlobo
Ukushona kwelanga emaminithini ambalwa: ukukhanya ukwakha i-Artdeco Island Island
Ukwakheka kwefashini 2015: izitayela zamanje zonyaka ka-2015
I-smokey engenandaba: yephula imithetho kahle
Ukudla okunempilo okuvela embonweni odokotela
Ukudla okulusizo kwabantwana
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-gypsum
Ama-scythe kanye nezinhlobo zazo zokugqoka
Yini engcono ukukhetha udoti ekhishini?
Ama-smoothie we-avocado ne-peach
Unganqoba kanjani ubuvila?
Yini ongayinika ugogo nomkhulu wami ngamaholide omnyaka omusha?
Idizayini yanamuhla yamafulethi
Ukuphumula okuvela ezinyaweni ezincane ezinganeni
Imishado ephezulu kakhulu exoxwa kakhulu yezinkanyezi zasekhaya ngo-2015
Indlela yokukhulisa izingane ukuze zikhule zibe ngabantu abalungile
Bakhohlisa kanjani ekudleni?